बाबुरामका ट्विट भन्दा भँगेराको चिरबिर मीठो– डा. श्रेष्ठ - Everest Dainik - News from Nepal
बाबुरामका ट्विट भन्दा भँगेराको चिरबिर मीठो– डा. श्रेष्ठ
काठमाडौं, वैशाख १२ । वातावरण तथा सामाजिक अध्ययनका क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका डा. तीर्थ बहादुर श्रेष्ठले नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईमाथि व्यंग प्रहार गरेका छन् ।
शिक्षक मासिकको एक आलेखमा डा. श्रेष्ठले बाबुराम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटका बारेमा टिप्पणी गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वदीपकाे कडा टिप्पणी: तपाईकै कारण बाबुरामले थुप्रै करिश्मा गुमाएकाे बिर्सिनु भाे ?
बिहानै घरको झ्यालमा सुनिने भँगेराको चिरविर डोनाल्ड ट्रम्प वा बाबुरामका ट्वीट भन्दा अवश्व मीठो हुन्छ, सुनिहेरौं ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरुमा सबैभन्दा बढी ट्विट र फेसबुकमा स्टाटस राख्ने नेताका रुपमा बाबुराम भट्टराई चिनिन्छन् ।
ट्याग्स: Baburam Bhattarai, Dr. Tirtha Bahadur Shrestha